२०७४ चैत १८ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
रिलायन्सले पर्साका उखु कृषकलाई आत्महत्या गर्न उन्मुख गर्दैछ –किसान
प्रस, परवानीपुर, १७ चैत/ बाराको मनहर्वामा रहेको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल प्रालिले पर्साका किसानलाई आत्महत्या गर्नेतर्पm उन्मुख गराएको पर्साका उखु कृषकले आरोप लगाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साको सभाहलमा किसान हकहित सङ्घर्ष समिति पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उखु मिलले पर्साका किसानलाई मार्न खाजेको आरोप लगाइएको छ । मिलले पर्सामा ठूलो परिमाणमा उखु रोप्न लगाएर भारतबाट गैरकानूनी तरिकाले सस्तो दाममा उखु भिœयाएको आरोप लगाइएको छ । सङ्घर्ष समितिका पृथ्वी साहले यस वर्ष मात्रै आपूmले रु २ लाख ऋण काढेर रु १२ लाखको उखु बेचेको तर हालसम्म एक कौडी भुक्तानी नपाएकोले आत्महत्या गर्ने बाध्यात्मक अवस्था मिलले सृजना गर्न लागेको बताए । उनले उखु मिलले समयमा पर्साका उखु किसानलाई चलान नदिंदा पर्साका किसानको उखु खेतमैं सुक्ने अवस्था सृजना हुँदै गएको र बेचेको उखुको पैसा पनि नदिएको भनी मिललाई कारबाहीको लागि माग गरेका छन् । मिल सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल (राजु गाडिया) र वीरेन्द्र संघईले पर्साका उखु किसानलाई लुटेर मार्न खोजेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीले बताए । पर्सामा ५ ह
भारतीय अपराधीको अखाडा बन्दै पटनी
प्रस, वीरगंज, १७ चैत/ पर्सा प्रहरीमाथि शुक्रवार साँझ बहुदरमाई नगरपालिका–५ मा आक्रमण भएको छ । अपराधी समातेका प्रहरीलाई स्थानीयले लाठी र ढुङ्गाले आक्रमण गरी अपराधी मात्रै छुटाएनन्, नियन्त्रणमा परिसकेका स्थानीय लम्बु यादवलाई भगाउन पनि सफल भएका थिए । स्थानीयको आक्रमणमा परी पर्सा प्रहरीका सञ्जयकुमार जयसवाल, अनिल यादव, राकेशकुमार यादव, नवीन पौडेल र ऋतुराम सोनार घाइते भएका छन् । पर्सा प्रहरीले घटनामा स्थानीयद्वारा बन्दुक बोकेका प्रहरी घाइते भएको खबरको पुष्टि गरिसकेको छ । घाइते सुरक्षाकर्मीको ठेगाना र दर्जा खुलाइएको छैन भने नाउक्षेमा उपचार गरी काममा फर्किसकेको प्रहरीद्वारा जानकारी गराइएको छ । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता राजन लिम्बुले लागूऔषधका अभियुक्तलाई समात्न जाँदा ठूलो सङ्ख्यामा महिला, पुरुषले आक्रमण गरी प्रहरीलाई घाइते बनाएको बताए । प्रहरीले कालिकामाई–१ का लागूऔषधका फरार अभियुक्तलाई समात्न पुगेको प्रहरीको दाबी छ । तर घटनाको चुरो कुरो भने बेग्लै छ । नवनागरिक लम्बुलाई समात्ने योजना थियो पटनी, भारतीय कुख्यात अपराधी बस्ने टोलमा अहिले चर्चा कमाउँदै छ । स्थानीय एकजनाले बताए अनुस
चौथो चन्देश्वर स्मृति फूटबल प्रतियोगिताको उपाधि वीरगंज युनाइटेडलाई
प्रस, वीरगंज, १७ चैत/ सुक्खा बन्दरगाहमा बजरङ्गी युवा क्लबले आयोजना गरेको चौथो चन्देश्वर स्मृति पूmटबल प्रतियोगिताको उपाधि वीरगंज युनाइटेडले जितेको छ । फाइनल खेलमा वीरगंज युथ एकेडेमीलाई शून्यका विरुद्ध २ गोलअन्तरले पराजित गरी वीरगंज युनाइटेडले उपाधि जितेको हो । वीरगंज युनाइटेडका प्रज्ज्वल थापामगर र विदेशी खेलाडी गेलरीले १–१ गोल गरेका थिए । आज सम्पन्न फाइनल खेलका विजयी खेलाडी, टिमलाई प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य अञ्जु यादवले रु १ लाख, मेडल, शिल्ड, प्रमाणपत्र प्रदान गरेकी थिइन् । उपविजेतालाई भने नगद ५० हजारसहित पुरस्कृत गरिएको थियो । यसैगरी, प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी वीरगंज युनाइटेडका प्रज्ज्वल थापामगर घोषित भए । यस्तै, उत्कृष्ट गोलकीपरमा प्रदीप भण्डारी, अग्रपङ्तिको खेलाडीमा विदेशी गेलरी र वीरगंज युथ एकेडेमीका कृष्ण शाक्य उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भए । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट डिफेन्डरमा कृष्ण कार्की घोषित भए । सबै खेलाडीलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले पुरस्कृत गरेकी थिइन् ।
विकासको आधार ः घुर्की कि रणनीति ?
ओमप्रकाश खनाल गत हप्ता वीरगंजमा भएको एउटा कार्यक्रममा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले प्रदेशको अर्थसामाजिक अवस्था र उत्थानका अवरोधबारे खुलेरै कुरा राखे । मुलुककै मुख्य आर्थिक केन्द्रलाई समेटेर पनि यो प्रदेशको मानवीय विकास दयनीय छ । यसले लक्षित विकासका अवरोधहरूलाई सङ्केत गरिराखेको छ । समस्या हुन्छन्, त्यसैले समाधानका विकल्पको खोजी पनि हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले २ नम्बरको विकास प्रयत्नमा केन्द्रीय सरकारको भूमिका सकारात्मक नभएको गुनासो मात्र गरेनन्, विकास बजेट अपेक्षित नभए राजमार्गमा ढाट तेस्र्याएरै स्रोत व्यवस्थापन गरिनेसमेत बताउन भ्याए । आयात–निर्यात व्यापारको मुख्य मार्ग हुनुका कारण वीरगंज नाकाबाट उठ्ने राजस्व आकारलाई आधार मानेरै मुख्यमन्त्रीले यो उपाय सोचेको हुनुपर्दछ । मुख्यमन्त्रीको यो आशय रूपान्तरणको अवस्था आउला कि नआउला ? कार्यान्वयन कतिको सहज होला ? आशङ्का अस्वाभाविक छैन । मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको सुरुआती धरातलको सहजै भेउ पाउन सकिन्छ । सङ्घीयता पहिचानसहितको शासन र समतामूलक विकासको साधन हो भने यस्ता टकरावपूर्ण मनोविज्
एक मात्र हो सत्य
सत्य एक हुन्छ, अनेक हुँदैन । सत्य अनेक हुन सक्दैन । अनेकमा एक नै सत्यको अभिव्यक्ति हुन्छ । जसरी चन्द्रमा एक हुन्छ, तर नदीको हरेक जलकणमा त्यो अलगअलग देखिने प्रतीत हुन्छ । यदि यस प्रतीतिलाई कसैले सत्य मान्यो भने उसको अज्ञानता नै हो । सत्य त एक हो, तर त्यससम्म पुग्ने ढोका अनेक अवश्य हुन सक्छन् । अलगअलग ढोकाबाट त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ । जुन द्वारको आकर्षणमा अल्झिएर जो त्यसको मोहमा पर्छ, त्यो द्वारमैं अडिन्छ । यस्तोमा सत्यको समीपता उसको लागि कहिल्यै सुलभ हुन सक्दैन, वरन् दुर्लभ नै बनिरहन्छ । जुन आँखाबाट देखिन्छ, त्यो इन्द्रियजन्य सत्य हो । आँखाबाट जे देखिन्छ, हामीलाई त्यत्तिकै सत्य लाग्छ, तर जुन देखिंदैन, त्यो छैन, यस्तो हुँदैन । सत्य त यसभन्दा टाढा छ । जसरी–जसरी इन्द्रियको सीमालाई हामी नाघ्दै जान्छौं, त्यसरी–त्यसरी सत्य प्रकट हुन थाल्छ । मनको धरातलमा यो स्पष्ट देखिन्छ र मनको सीमालाई पार ग¥यौं भने सत्य झनै स्पष्ट देखिन थाल्छ । यो त यस्तो हो, जसरी दर्पणको माथि जमेको धूलो सफा गर्दै जाँदा प्रतिविम्ब पनि त्यत्तिकै सफा देखिन्छ । अतः हामीलाई जुन सत्य देखिन्छ, त्यो सापेक्ष रूप हो। संसा
२०७४ चैत १७ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
वर्षासँगै परेको असिनाले करोडौं मूल्यको बालीनाली नष्ट
प्रस, रौतहट, १६ चैत/ रौतहट जिल्लाको मध्यभागमा आज शुक्रवार वर्षासँगै परेको असिनाले करोडौं मूल्यका बालीनाली नष्ट गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको पचरूखी, मत्सरी, भलोहिया, गङ्गापिपरा, बडहर्वा, राजदेवी नगरपालिकाको पथरा, चण्डिया, बसतपुर, यमुनामाई गाउँपालिकाको सरुअठा, झुनखुन्वा, राजपुर तुलसी, भेडरहियालगायतका ठाउँमा आज बिहान पानीसँगै परेको असिनाले गहुँ, आँप, लिच्ची, कटहर, तरकारीखेती, दलहनबाली असिनाले नष्ट गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रौतहटका सूचना अधिकारी मोहन महतोले बताए । लगभग २५ ग्रामदेखि ५ सय ग्रामसम्मको असिना एक्कासि पर्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित भएको थियो । आज बिहान करिब ८ः३० बजेदेखि परेको असिनाले करोडौं मूल्यका बालीनाली क्षति गरेपछि किसानहरू मारमा पारेका छन् । यथार्थ क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको जिकृविका रौतहटले जनाएको छ । असिनाले खपडा घरको छानोसमेत फुटाएको छ भने फुस घरको छानोमा प्वालै प्वाल बनाइदिएको पीडितहरूले बताए । साउन २९ गते आएको विनाशकारी बाढीले धानखेतीलगायत घरमा रहेको खाद्य सामग्रीसमेत नष्ट गरेको सर्वविदितै छ ।
रिले अनशनलाई निरन्तरता दिन सकेन
प्रस, वीरगंज, १६ चैत/ प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै घण्टाघरमा शुरु गरिएको रिले अनशन अहिले एक साताभन्दा बढी समयदेखि स्थगित छ । प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै गठन भएको वीरगंज सङ्घर्ष समितिले चैत २० गते वीरगंज बन्दको घोषणा गरेको छ । बन्द घोषणा गरेको सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा घण्टाघरमा गरिएको रिले अनशनले निरन्तरता नपाएपछि बन्द हुने–नहुनेमा पनि द्विविधा उत्पन्न भएको छ । समितिले डेढ साताअघि चैत १८ गते अन्तत्र्रिmया, १९ गते मसाल जुलुस र २० गते वीरगंज बन्दको घोषणा गरेको थियो । घोषणा गरेकै अवधिदेखि पुस २१ गतेदेखि भइरहेको रिले अनशन अघोषितरूपमा बन्द भएको छ । प्रादेशिक राजधानी अस्थायीरूपमा जनकपुर घोषित भएपछि अबका दिनमा वीरगंजलाई राजधानी बनाउन प्रदेशसभाका दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले रिले अनशनको औचित्य नभएको भनी समितिमा विवाद पनि भइरहेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीको निर्देशनमा पहिलो वीरगंज भ्रमणमा प्रदेशमन्त्री जीतेन्द्र सोनलमार्पmत् आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरिएको थियो । सोही वार्तालाई आधार बनाएर आन्दोलन स्थगित गर्ने तारतम्य मिलाए पनि पछि त्यो स
भेट्रान फूटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा
प्रस, पथलैया, १६ चैत/ सिमरा महोत्सवमा जारी भेट्रान पूmटबल प्रतियोगितामा शुक्रवार चार खेल भएका छन् । सिमरा रङ्गशालामा भएका खेलमा चन्द्रपुर भेट्रान, चितवन भेट्रान, हेटौंडा भेट्रान र अभिषेक चर्च नवलपरासी विजयी भएका छन् । चन्द्रपुरले सिमरा भेट्रान क्लबलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो भने चितवनले टाइब्रेकरमा जावलाखेललाई पराजित गरेको छ । निर्धारित समयमा दुवै टिमले बराबरी गोल गरेपछि खेल टाइब्रेकरमा पुगेको हो । टाइब्रेकरमा चितवन २–० गोलअन्तरले विजयी भएको हो । यसैगरी, हाम्रो क्लब वीरगंजलाई हराउँदै अभिषेक चर्च नवलपरासी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नवलपरासीले वीरगंजमाथि ४–१ गोलअन्तरको जीत हात पारेको हो । प्रतियोगितामा हेटौंडा सीधैं सेमिफाइलनमा प्रवेश गरेको छ । ४० वर्ष उमेर पुगेका खेलाडी मात्रै खेल्न पाइने यस खेलमा कम उमेरका खेलाडी देखिएपछि आयोजकले नवलपरासीलाई खेलबाट वञ्चित गर्दै हेटौंडालाई विजयी घोषणा गरेको हो । यससँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलको समीकरण पूरा भएको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार हुने सेमिफाइनल खेलमा हेटौंडाले चपुरसँग खेल्नेछ भने नवलपरासीले चितवन
– समीर पाख्रिन गताङ्कको बाँकी... दृश्य – अन्तरीले चाल मारेर झ्यालबाट कोठाभित्र चियाउँदा कोठामा रने, जुठे मगर र भुँडे सार्र्की रक्सी पिउँदै गफिन्दै गरेको देख्छे । जुठे मगर – हेर रने तँ आपूmलाई एक्लो नठान् । भुँडे सार्की – हामी तेरो साथमा छौं । त....त.....तर अन्तरी घर फर्केर आ...आएमा के गर्छेस् ? रने – ला......लात्तै लातले हानेर घरबाहिर निकाल्छुु । जुठे मगर – स्यावास् १ ब...बल्ल मर्दले जस्तो कुरा गरिस् । रने – म...लाई थ...थाहा छ । त...तैंले सिकाउनुपर्दैन । पोइल गएकी आइमाईलाई के गर्नुपर्छ ? मलाई थाहा छ । एउटा अन्डा फुट्यो फुट्यो । ए हे १ रक्सी पनि सकिएछ । जुठे मगर – मसँग अर्काे बोतल छ । (सुरुवालको खल्तीबाट बोतल झिक्दै) भुँडे सार्की – ल ल हाल् । भोलि म...मेरो पालो । जुठे मगर – यति स्वाट्टै पारेर घरतिर लाग्नुपर्छ है । रने – यतै सुते भैहाल्छ नि । भँुडे सार्की – घर गएर भात पनि त खान प¥यो नि रने । तेरो पो स्वास्नी हिंडिहाली, हाम्रो त कुरेर बसेकी हुन्छे । जुठे मगर – ऐ भुँडे उठ् उठ् । हिंड् । अलिकता बढी खायो भने जे पनि बोल्छ । अँ, रने हामी गयौं
हनुमान बाँदर नै थिए त ?
सञ्जय मित्र शनिवार र मङ्गलवार हनुमान आराधना गर्ने प्रचलन निकै बढेको छ । बजरङ्गबलि, लक्ष्मण र रामलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा बलरा हो रे पत्रकार चन्द्रकिशोरको मतमा । हो, यही बलराको आसपासको क्षेत्रमा हरेक दिन हनुमान आराधना गर्न थालिएको छ । अन्यत्र भने मङ्गलवारलाई विशेष र मङ्गलवारको दिन नहुने स्थिति आएमा शनिवार पनि हनुमान आराधना गर्न थालिएको छ । मङ्गलवार, शनिवार वा अन्य वारमा के भिन्नता छ, त्यो त गर्ने वा गराउनेहरू नै जानून् तर मङ्गलवार हनुमानको पूजा गर्ने र व्रत बस्नेहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो छ, हाम्रो समुदायमा । चिकित्सकले एक दिन व्रत बस्नुस् भनेर सल्लाह दिंदा पहिलो रोजाइ मङ्गलवार नै हुने गरेको छ धेरैको । माछामासु अलि कम खानुस् हैन भने स्वास्थ्य जटिलता बढ्दैछ भनेर चिकित्सकको सल्लाह कसैलाई प्राप्त हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले मङ्गलवार नै सर्वसाधारण वा शिक्षित समुदायले पनि माछामासु नखाने प्रण लिन्छन् । यो मङ्गलवारको प्रभाव नै हो । एक दिन शाकाहारी बस्नुपरे मङ्गलवार नै रोज्नेहरूको सङ्ख्या धेरै हुनुले गर्ने सङ्केत यही हो । हिन्दू शास्त्रहरूले हनुमानको जन्मदिन चैतको पूर्णिमा र कात्तिकको कृ
जनकपुरधामको ऐतिहासिक परिचय
डा. बासुदेवलाल दास, पीएच.डी. सहप्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंज नेपालको जनकपुर अञ्चल, धनुषा जिल्लामा अवस्थित जनकपुरधाम विश्वकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि आस्थाको केन्द्र रहेको छ । ऐतिहासिक र धार्मिक महŒव बोकेको यो धाम आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका लागि पनि रमणीय गन्तव्यको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । जनकपुर नगरको नामकरण मिथिलाका राजा जनकको नामबाट भएको मानिन्छ । जनकपुर नगर अहिले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि एउटा पवित्र धामको रूपमा रहेको छ । जनकपुरधामको भौगोलिक अवस्थिति उत्तरी आक्षांश २६० ३५’ – २७० ५’ एवं पूर्वी देशान्तर ८५० ५२’ – ८६० २०’ को बीचमा वर्तमान नेपालको जनकपुर अञ्चलको धनुषा जिल्ला अन्तर्गत रहेको छ । राजा जनकको यस नगरी जनकपुरधामको नामबाट नै यस अञ्चलको नाम राखिएको हो । यो एउटा ऐतिहासिक तथा धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा विश्वमा प्रख्यात रहेको छ । जनकपुरधामको परिसीमाभित्र अनेक मठमन्दिर एवं ताल, सरोवर रहेका छन् । जनकपुरधामको श्रीजानकी मन्दिर, जसलाई नौलखा मन्दिर पनि भनिन्छ, आकर्षणको प्रमुख केन्द्रको रूपमा रहेको छ । यस मन्दिरको शिलान्यास विक्रम संवत् १९५२ माघ
राष्ट्रविकासको आवरणमा नेता समृद्ध
वैद्यनाथ ठाकुर सुन्दर भविष्यको परिकल्पना मानिसले गर्नु स्वाभाविक हो । वर्तमानको समस्यामूलक कटु यथार्थलाई बदल्न मानिसहरू विभिन्न योजनाहरू बनाउने गर्छन् । ती योजना मनोगत भएपनि, वस्तुगत भएपनि पूरा गर्न भएभरको साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति मानिसले प्रयोग गर्छन् । वास्तवमा विकास प्रकृतिको चरित्र हो । विकासको अभावमा प्रकृतिको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । यो अलग कुरा हो कि मानिसहरू एक्काइसौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा उनीहरूभित्रको भाइचारा, बन्धुत्व, शान्ति, सेवा, सहयोग जस्ता उच्च नैतिकता र मानवीयताका कुराहरू केवल किताबको पाना वा नेताहरूको भाषणभित्र मात्र समेटिंदै गएका छन् । मानिसहरू भन्नलाई अभैm पनि समाजशास्त्रीहरूको विश्लेषणमा सामाजिक प्राणी नै हुन् तर वास्तवमा यिनीहरूबाट सामाजिकताको पतन भइसकेको छ । यतिबेला मानिसहरू व्यावहारिक कम तथा व्यावसायिक बढी भइसकेका छन् । प्रत्येक कुरामा आप्mनो नाफा वा नोक्सान हेरेर मात्र पाइला चालिरहेका छन् । छोराछोरी जन्माउँदासमेत भ्रुणको परीक्षण गरी पत्ता लगाउँछन्, छोरा हो कि छोरी । छोरी रहेछ भने उसको हत्या गर्छन् र छोरा भए खुशीसाथ बच्चा पाल्छन्, पेटभित्र आमाले । मानिसह
सफाइ संवेदनशीलता आवश्यक
वीरगंज महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि हालका दिनमा कडाइ शुरु गरेको भान हुन थालेको छ । नगर र वडा स्तरीय गरी दुई तहबाट फोहर व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको वीरगंज महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन कार्य बेलाबेलामा आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । हाल प्रदेश नं ३ का मुख्यसचिव रश्मीराज पाण्डे वीरगंज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहँदा वीरगंजको सफाइ कार्य चर्चा गर्ने लायक बनेको थियो । त्यस अघि र पछिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आएन वीरगंज महानगरपालिकाको सफाइको सन्दर्भमा । तत्कालीन अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले अख्तियार गरेको सफाइ नीतिलाई अहिलेका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले अनुसरण गरेको देखिन्छ । पाण्डेले बिहान, दिउँसो र साँझ गरी दैनिक तीन समय फोहर सङ्कलन गर्ने र त्यसपछिका समयमा घर, पसल, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई फोहोर तोकिएको स्थानभन्दा अन्यत्र फाल्न निषेध गरिएको थियो । त्यतिखेर पनि फोहोर सङ्कलनको कार्य साइरन बजाएर गरिन्थ्यो । अहिले पनि सोही कार्य दोहोरिएको अवस्था छ । राम्रा कामको सिको गर्नुपर्छ र यस मानेमा सफाइका लागि भएको सिकोको प्रशंसा गर्नुपर्छ । वीरगंज
२०७४ चैत १६ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
तेरापन्थ युवक परिषद्ले मनायो २६१७ औं महावीरजयन्ती, भगवान महावीरको बाटोमा लाग्दा राज्य हिंसामुक्त बन्छ –मुख्यमन्त्री गद्दी
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ राजनीतिक स्तरमा सङ्घीयता स्वीकार गरेको तर कर्मचारीतन्त्रले अहिलेसम्म सङ्घीयता स्वीकार नगरेको कारण प्रदेश नं. २ को समस्या समाधान हुन नसकेको मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले बताएका छन् । तेरापन्थ युवक परिषद्ले आयोजना गरेको २६१७ औं महावीर जयन्तीको अवसरमा बोल्दै उनले भगवान् महावीरले अङ्गीकार गरेको अहिंसाको बाटोमा लागेको खण्डमा देश–प्रदेशमा हिंसा न्यून हुने र समृद्धितर्पm उन्मुख हुन सक्ने बताए । मुख्यमन्त्री गद्दीले भगवान् महावीरको विविध पक्षबारे चर्चा पनि गरे । सोही कार्यक्रममा उनले अङ्गीकृत नागरिकता समस्या समाधान भए पनि कर्मचारीको लापरवाहीको कारण प्रदेश नं. २ का जन्मसिद्ध नागरिकले आप्mनो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसकेको आरोप लगाए । संविधान र कानुनले नागरिकता दिन नरोके पनि कर्मचारीतन्त्रको हैकमबाजीका कारण नागरिकता समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सो विषयमा कुराकानी भएको र उनले सम्पूर्ण जिल्लामा तत्काल निर्देशन दिई नागरिकता वितरण हुने मुख्यमन्त्री गद्दीले बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. २ मा सुरक्ष्Fाको सवाल चुनौत
मधेस आन्दोलनको क्रममा मानव अधिकारको व्यापक हनन
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा आज एक दिने अन्तत्र्रिmया तथा राय सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम वीरगंज महानगरपालिकाको सभाहलमा भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरूले मधेस आन्दोलनको क्रममा व्यापक मानव अधिकारको हनन भएको तर मानव अधिकार आयोगले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका थिए । स्थानीय तहमा व्यापकरूपमा भ्रष्टाचार भइरहेको र त्यसको जिम्मेदार कर्मचारीहरू भएको सहभागीहरूले बताएका थिए । महिला हिंसा, दाइजोप्रथा, बालविवाह, प्रहरी दमन, बिना कारण प्रहरीले मानसिक यातना दिने गरेको जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा संविधानले दिने व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीहरूको लापरवाहीको कारण वितरण प्रक्रिया शुरु नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले डेढ वर्षको अन्तरालमा मधेसको ८२ स्थानमा कार्यक्रम गरेको बताए । ८० प्रतिशत मधेसको मुद्दाको प्रतिवेदन बनाएको र २० प्रतिशत अन्य विषयको मुद्दा बनेको उनले बताए । आपूmबाट परिवर्तन गरी समाजलाई देखाउन पाठकले आग्रह गरेका थिए । व्यवहार, सिद्धान्त, प्रेम, मान्यताले मानिसको मन परिवर्तन गर्ने भएको
बेल्वाका हिफाजतले गरे १७ लाखको ठगी, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
प्रस, परवानीपुर,१५ चैत/ वीरगंज–३१ बेल्वाका हिफाजत अन्सारी जग्गा कारोबारमा साढे १७ लाख ठगी गरी फरार भएका छन् । हिफाजतको खोजतलाशको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा उजुरी परेको छ । हिफाजतले वीरगंज– ३० लालपर्साका मुनिराउत अहिरसँग जलसाजी गरी बैना गरेको रकम ठगेर फरार भएको उजुरीमा उल्लेख छ । हिफाजतले साबिक बेल्वा–१ का ३१२, ७२७, ७२९, ७३७, ७३९, ७४१ नं गरी जम्मा ६ कित्ता (एक बिघा ११ कठ्ठा १० धुर) क्षेत्रफल बराबरको जग्गा रु ७८ लाख ७५ हजारमा बेच्न मुनीराउतसँग २०७३ साउन २८ गते बैना गरेका थिए । बैनाबापत उनले त्यति बेला साढे १७ लाख रुपियाँ नगद पनि दिए । बैनापत्रमा भदौ १० गतेसम्म जग्गा पास गराउनुपर्ने शर्त राखिएकोमा भदौ ५ गतेको मितिमा उक्त जग्गा उनले अंशबन्डा गरी जग्गा बेचेको मालपोतको श्रेस्ताले देखाउँछ । हिफाजत, निजकी पत्नी एवं ६ जना छोरा गरी ८ जनाको अंशबन्डा छुट्याई जग्गा बेचेका छन् । उनको हकभोगको जग्गा पर्सा, जगरनाथपुर–१ की महजदिया खातुन एवं निजका छोरा मुनिर अलि अहमदको नाममा मिति २०७३/०५/५ गतेका दिन लेखत पास भएको मालपोत कार्यालय, पर्साले जनाएको छ । जग्गा पास गरेको थाहा भएपछि त्यस
वीरगंज भन्सारबाट आयातको तुलना निर्यात निकै घट्दोे
प्रस, वीरगंज, १५ चैतर वीरगंज भन्सार नाकाबाट निर्यात घट्दो छ । आयात बढेको तुलनामा निर्यात भने वार्षिक घट्दै गएको वीरगंज भंसार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वीरगंज भंसारको तथ्याङ्क अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा सामान आयात भए पनि निर्यातको दर भने दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । वीरगंज नाकाबाट चालू आवको आठ महिनामा गत आवको तुलनामा ३२ गुणाले आयात वृद्धि भएको छ तर निर्यात भने २३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा वीरगंज नाकाबाट रु दुई खर्ब १५ अर्ब ४६ करोड ८६ लाखको वस्तु आयात भएको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा २० प्रतिशत बढी आयात भएको छ अर्थात् रु ४३ अर्ब ५३ करोड दुई लाख मूल्य बढीको वस्तु आयात भएको छ । यसैैगरी गत आवको साउनदेखि फागुनसम्म रु १० अर्ब १० करोड २९ लाखको विभिन्न वस्तु निर्यात भएको थियो । तर चालू आवको सोही अवधिमा २३ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब २९ करोड ७५ लाखको वस्तु मात्र निर्यात भएको वीरगंज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
रु ४६ लाखको लागतमा प्रथम जीतपुर खेलकूद तथा साङ्गीतिक मेला
प्रस, जीतपुर, १५ चैत/ वीरगंज–जीतपुर गौशालाको जग्गामा यही चैत २८ गतेदेखि वैशाख ९ गतेसम्म प्रथम जीतपुर खेलकुद तथा साङ्गीतिक व्यापार मेला २०७४–७५ को तयारी पूरा भएको आयोजक संस्थाका संयोजक मनोजकुमार साहले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । मेलाको सफलताको लागि सक्दो सहयोग गर्ने वडाध्यक्ष रामबाबूप्रसाद कलवार, शिवजी साह सोनार, देवनारायण चौधरीले मन्तव्यमा बताएका थिए । मेलामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूद्वारा प्रत्येक दिन साङ्गीतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुको साथै स्थानीय उत्पादन, कला, सांस्कृतिक गीत, झाँकीसमेत प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा भएको आयोजक सदस्यहरू शेखर भण्डारी, नवीन मैनालीले जानकारी दिए ।
सिमरा महोत्सवमा भेट्रान फूटबल शुरु
प्रस, पथलैया, १४ चैत सिमरामा जारी औद्योगिक मेला तथा खेलकुद महोत्सवमा बिहीवारदेखि भेट्रान पूmटबल शुरु भएको छ । सिमरा रङ्गशालामा भएको पहिलो दिनको खेलमा हाम्रो पूmटबल क्लब वीरगंज, सनसाइन एकेडेमी कैलाली, अभिषेक चर्च नवलपरासी र हेटौंडा भेट्रान क्लब विजयी भएका छन् । वीरगंजले बकुलिया भेट्रान क्लबलाई २–१ ले पराजित गरेको हो । यसैगरी कैलालीले भेट्रान सिटी अफ वीरगंजलाई ३–० ले पराजित गरेको खेलकुद व्यवस्थापक समिर आलेले जानकारी दिए । यसैगरी नवलपरासीले सिमरा भेट्रान बीलाई ३–० ले पराजित गरेको छ भने सिलगुडी भेट्रान क्लब अनुपस्थित भएपछि हेटौडा क्लब सीधै अघिल्लो चरणमा पुगेको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रवार सिमरा भेट्रान एविरुद्ध चपुर भेट्रान, चितवन भेट्रानविरुद्ध जावलाखेल, सनसाइन एकेडेमीविरुद्ध हेटौंडा र अभिषेक चर्चविरुद्ध हाम्रो पूmटबल क्लबबीच खेल हुनेछ । १२ टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको विजेताले एक लाख र उपविजेताले ५० हजार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिताको फाइनल खेल १८ गते हुनेछ । यस अघि प्रतियोगिताको उद्घाटन सिमराका युवा नेता श्यामबाबू गुप्ताले गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्र
चौथो चन्देश्वर स्मृति फूटबल प्रतियोगिता, वीरगंज युथ एकेडेमी फाइनलमा प्रवेश
प्रस, वीरगंज, १५ चैत/ बजरङ्गी युवा क्लब सुक्खा बन्दरगाह श्रीसियाद्वारा आयोजित चौथो चन्देश्वर स्मृति पूmटबल प्रतियोगिताको आज सम्पन्न सेमिफाइनलमा बारा–११ लाई टाइब्रेकरमा पराजित गर्दै वीरगंज युथ एकेडमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आज सम्पन्न सेमिफाइनलमा बारा–११ र वीरगंज युथ एकेडमीबीच निर्धारित खेल समयमा १–१ गोलको बराबरी भएपछि टाइब्रेकरबाट निर्णय गरिएको हो । टाइब्रेकरमा शून्यका विरुद्ध ३ गोल गरी वीरगंज युथ एकेडमी विजयी भएको हो । आजको खेलमा बाराबाट चतुर्धन चौधरी र वीरगंज युथ एकेडमीको तर्पmबाट कृष्ण शाक्यले १–१ गोल गरेका थिए । खेलको म्यान आफ द म्याच वीरगंज युथ एकेडमीका गोलकीपर जयराम चौधरी घोषित भए । उनलाई वडा नं. २५का नपस रामकिशोर साहले पुरस्कृत गरेका थिए । प्रतियोगिताको फाइनल चैत १७ गते वीरगंज युथ एकेडमी र वीरगंज युनाइटेडबीच दिउँसो ३ बजे हुने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष्F प्रकाश चौधरीले बताएका छन् ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आँखा नेपाल तिर
ई. गोपाल श्रेष्ठ विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आँखा यतिबेला नेपालतिर केन्दि«त भएको आभास हुन थालेको छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू भन्नाले अमेरिका, युरोपियन युनियन र भारत पनि हो । नेपालको वामपन्थी सरकार यी राष्ट्रहरूलाई अलिकता पनि पचेको छैन, अर्थात् सह्य हुन सकेको छैन । कारण, यी राष्ट्रहरू पूर्ण प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक छन् अनि अरू राष्ट्रहरू पनि आपूmजस्तै प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक भएको देख्न चाहन्छन् । हाम्रो नेपाल पनि लोकतान्त्रिक त छँदैछ । तर वामपन्थी सरकार भएकोले उनीहरू पत्याउँदैनन् । वामशक्तिलाई यिनीहरू एकाधिकारी शक्ति मान्दछन् । हुन पनि नेपालस्थित युरोपियन युनियनले अहिलेदेखि नै असहयोगको लक्षण देखाउन शुरु गरिसकेको देखिन्छ । भारतको त केही भर नै छैन, झोक चल्यो कि नाकाबन्दी गरिहाल्छ । नेपालीहरू दुःखमा नै हुर्केका अनि बढेकाले जतिसुकै दुःख खप्न/सहन सक्छन् । नेपालीहरूको यही विशेष गुणले भारतीय नाकाबन्दीको पीडा मज्जाले पचाएको हाम्रो अनुभव छ । नेपालबाट भारत, युरोपभन्दा अमेरिका अझै टाढा छ । आर्थिक, भौतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक विकास तथा प्रगतिलाई हेर्दा युरोप भनेको २० औं शताब्दीको दाद
कृषिमा लगानी बढाऊ
शीतल महतो नेपालीमा एउटा उखान छ – न हाँस को चाल, न कुखुराको चाल । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अनुरूप मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनवटै तहको सरकारसमेत गठन भइसकेको छ । तीनै तहको सरकार गठन भएपछि मुलुक अब आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्किने विश्वास सबैतिर देखिएको छ । तर दलहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न नसक्दा मुलुक अहिले पनि आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने प्रश्न सबैतिर उब्जिएको छ । मौसम र परिस्थिति बदलिंदा सोच बदल्ने नेपाली प्रवृत्ति आत्मनिर्भरताको गफ गरेर आत्मरतिमा रमाउनेभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् । नेपालमा आर्थिक विकासको उच्च सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्र परनिर्भरताको पराकाष्ठाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । छैटौं योजना अवधि (०३६/०३७ —०४१/४२) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत थियो । आठौं योजनापछि यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गई नवौं योजनाको अ
गरीबीको कारण ज्ञानको अभाव
विश्वराज अधिकारी अनेक साधन र स्रोत भए तापनि दक्षिण एसियाका मुलुकहरू गरिब र साधन–स्रोतको पर्याप्तता नभए तापनि पश्चिमका राष्ट्रहरू धनी हुने कारण धेरै छ । ती धरै कारणहरूमध्ये एउटा महŒवपूर्ण कारण हो, दक्षिण एसियामा ज्ञानको अभाव हुनु । दक्षिण एसियामा ज्ञानको प्रचुर अभाव छ । हामीले जतिसुकै गर्व गरे तापनि, आपूmले आफैलाई हामी महान् छौ भने तापनि, दक्षिण एसिया मात्र होइन, सम्पूर्ण एसिया नै ज्ञानको क्षेत्रमा पश्चिमभन्दा सयौं वर्ष पछाडि छ । ज्ञानको अभावले गर्दा नै एसियाका मुलुकहरू गरिब भएका हुन्, साधन र स्रोत नभएर होइन । दक्षिण एसियाको आर्थिक जीवन कष्टकर ज्ञानको अभावले गर्दा भएको हो । दक्षिण एसियाका नागरिकहरू पश्चिमी राष्ट्रहरूमा पुग्न हरदम लालायित हुने प्रमुख कारण पनि यस क्षेत्रमा ज्ञान र धनको अभाव हुनु हो । ज्ञानको अभावमा धनको सृजना हुन सक्तैन भन्ने यथार्थमा हामीले अविश्वास गर्न मिल्दैन । सियोदेखि हवाईजहाजसम्म, साबुनदेखि सलाईसम्म, अनि चीनीदेखि चियासम्म, सम्पूर्ण वस्तुको आविष्कार पश्चिमका राष्ट्रहरूमा भएको हो । संसारभरिमा नै, विभिन्न वस्तुहरूको आविष्कार गर्नमा ब्रिटेन, अमेरिका र जर्मनी
श्रीमन्नारायण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हुने भएको छ । यस महिनाको अन्तिम साता उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो विदेश भ्रमण प्रायः दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट नै हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्न निम्तो दिएका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान समयमा नेपालको वामपन्थी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण एवं बहुआयामिक महŒवको मानिंदैछ । उनको यस भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउने तथा परस्पर विश्वलाई अझ बढी विकसित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको दौरान जनस्तरको सम्बन्ध, विकास तथा सहयोग, साझेदारी, व्यापार र पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा प्रकोप व्यवस्थापनमा सहकार्यलगायत द्वीपक्षीय हितका कतिपय महŒवपूर्ण विषयहरू
सरकारले सङ्कीर्णता त्याग्नुपर्छ
सरकार सङ्कीर्ण बन्नुहुँदैन । राजनीतिक दलहरू पूर्वाग्रही बन्नुहुँदैन र राजनेताले व्यक्तिगत द्वेष राख्नुहुँदैन । यस्तो भयो भने देशमा विग्रह उत्पन्न हुन्छ र समग्रमा देशको विकासमा बाधा मात्र पुग्छ । नेपालको कानूनमा कुनै व्यक्तिको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सरकारले लिन्छ भने त्यसको मुआब्जा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले त्यस्तो गरि पनि रहेको छ । कहाँसम्म भने व्यक्तिको हक नलाग्ने, ऐलानी जग्गामा पनि नागरिकले लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएको छ भने सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेको छ । जग्गामा बनाएको संरचनाको मात्र होइन, ऐलानी जग्गाको बदला नम्बरी जग्गा प्रदान गरेको कैयौं उदाहरण हाम्रो सामु छरपस्ट छ । तर सरकारले अलौ र श्रीसिया गाउँका किसानहरूको आइसिपी निर्माण गर्न लिएको सयौं बिघा जग्गाको मुआब्जा आजसम्म दिएको छैन । मुआब्जा माग गर्दै किसानहरू आइसिपी गेटमा धर्ना बसेको अढाई महिना नाघिसकेको छ, तर कुनै सुनुवाइ छैन । मुआब्जा नतिर्नुमा किसानहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य मागेकोले पनि होइन । सरकारको मुआब्जा निर्धारण टोलीले तय गरेको मूल्य नै सरकारले नतिरेको हो । आइसिपी निर्माण कार्य २०६७ सालमा भएदेखि क